ဖခင်ကို ရိုသေစွာရှိခိုးကန်တော့ပြီး အနမ်းလေးတွေနဲ့ ဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့ သမီးအလိမ္မာလေး ယွန်းယွန်း ⋆ The Ginger Media
ဖခင်ကို ရိုသေစွာရှိခိုးကန်တော့ပြီး အနမ်းလေးတွေနဲ့ ဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့ သမီးအလိမ္မာလေး ယွန်းယွန်း
TheGingerMedia · Posted on June 17, 2019 June 17, 2019
ပရိသတ်ကြီးရေ…..မနေ့က ဇွန်လ (၁၆) ရက်နေ့လေးကတော့ ကမ္ဘာ့အဖေများနေ့လေးဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ဖခင်တွေကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပေးတဲ့ ကြည်နူးစရာနေ့ရက်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
သားသမီးတိုင်းအတွက် စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလို Hero အဖြစ် အမြဲရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ ဖခင်တွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ နေ့လေးကတော့ တကယ်ကို ကြည်နူးပီတိဖြစ်စရာကောင်းသလို
တစ်ကမ္ဘာလုံးက အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ နေ့ထူးရက်မြတ်လေးမို့ ပြည်သူပရိသတ်တွေတိုင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြပြီး မင်းသမီးချောလေး ယွန်းယွန်းကလည်း ဖခင်ဖြစ်သူကို ဂုဏ်ပြုစကားလေး ဆိုထားတာ တွေ့ရပါတယ်..။
သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး ယွန်းယွန်းကတော့ ကျရောက်လာတဲ့ အဖေများနေ့လေးမှာ ဖခင်ဖြစ်သူကို ရိုသေစွာရှိခိုး ကန်တော့ပြီး ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်နော်..။
သူမရဲ့ ဖေဖေအတွက် လက်ဆောင်လေးနဲ့အတူ ရှိခိုးကန်တော့ပြီး ဂုဏ်ပြုစကားလေးလည်း ဆိုထားကာ သားအဖနှစ်ယောက် ဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ ကြည်နူးစရာ ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း မျှဝေထားပါသေးတယ်..။ “Happy Father’s Day Daddy
I’ve got so much strength from you to be what I am today.. I love you!!!..” ဆိုပြီး ချစ်စဖွယ်လေး ရေးသားထားသလို သားအဖနှစ်ယောက်ရဲ့ ကြည်နူးစရာပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေက သဘောကျနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်နော်..။
ပရိသတ်တွေသည်းသည်းလှုပ် အားပေးချစ်ခင်နေရတဲ့ ပြည်သူ့အသည်းကျော်လေး ယွန်းယွန်းတို့ သားအဖနှစ်ယောက်ရဲ့ အဖေများနေ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ကြည်နူးစရာပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
” သင်ဖုန်း အသုံးများနေပြီဆို ဒီစာလေးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်….. ”
ယနေ့ခေတ်တွင် လူတိုင်းနီးပါး ဖုန်း အသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကောင်းကျိုးများလည်း ရှိသလို ဆိုးကျိုးများစွာလည်း ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းနီးပါး အသုံးပြုများတာကြောင့်
ကောင်းကျိုးများကို သိနှင့်ပြီး ဖြစ်မှာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ယခုအခါ သတိပြု ဆင်ခြင်နိုင်ရန်အတွက် ဖုန်း အသုံးများခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁) ငွေကြေး အကုန်အကျ များခြင်း
သိပ်ကို ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ အချက်တစ်ခုပါ။ ဖုန်းဘေလ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Handset အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ငွေကြေးအကုန်အကျ များလွန်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဖုန်းဘေလ်အတွက်ဆိုရင်
အခုခေတ်လူငယ် တော်တော်များများက မနှမြောဘဲ အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ အကန့်အသတ်တစ်ခုထားပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် ပိုထွက်လာတဲ့ ဒီငွေကြောင့် တခြားအကျိုးရှိတာ သုံးနိုင်မှာပါ။
၂) လုပ်ငန်းခွင် ကို ထိခိုက်စေခြင်း
တစ်ချို့အလုပ်တွေမှာဆို လုပ်ငန်းချိန်အတွင်း ဖုန်းမသုံးရဆိုတဲ့ စည်းကမ်းတွေတောင် ထုတ်ပြန်လာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဖုန်းသုံးခြင်းက သင့်ကို အထက်လူကြီးက အထင်သေးစေပြီး သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။
၃) ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေခြင်း
အရင်တုန်းကဆို ဂိမ်းဆော့ရင်တောင် တီဗီ၊ ကွန်ပျူတာ စသည်ဖြင့် ဆော့ကြပေမဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ ဖုန်းကတော့ “All in one” ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဖုန်းအသုံးများလွန်းရင် ညအိပ်မပျော်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊
မျက်ရိုးကိုက်ခြင်း၊ အာရုံကြောထိခိုက်ခြင်း နှင့် အခြားဝေဒနာများလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သင်သာ ဒီလိုဝေဒနာတွေ ခံစားနေရပြီဆို ဖုန်းအသုံးပြုခြင်းကို လျှော့ပစ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
၄) လူမှုဆက်ဆံရေး ညံ့ဖျင်းလာခြင်း
ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြစ်ဖူးမှာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်၊ မိတ်ဆုံ စားပွဲအချိန်၊ မိသားစုနဲ့ အတူနေတဲ့အချိန်၊ meeting စသည်ဖြင့် အရေးကြီးတဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေမှာ ဖုန်းသုံးနေတာကြောင့်
ပတ်ဝန်းကျင်ကတောင် ကိုယ့်ကို ဖုန်းသုံးတာ ရပ်ဖို့ သတိပေးလာရပြီဆိုရင်တော့ သင် တကယ့်ကို ဆင်ခြင်သင့်ပါပြီ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုတွေနဲ့ ဖုန်းအသုံးပြုခြင်းကို မလဲလိုက်ပါနဲ့။
ဖုန်းထဲကို အာရုံရောက်နေတာကြောင့် သင့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို လွယ်ကူစွာ ကုန်ဆုံးစေပါတယ်။ ဖုန်း အသုံးပြုခြင်းကိုသာ လျှော့ချလိုက်မယ်ဆို သင့်ရဲ့ အချိန်တွေမှာ အခြားသော အကျိုးများတဲ့ ဘာသာရပ်တွေ၊ ဗဟုသုတတွေကို လေ့လာနိုင်မှာပါ။
၆) အထီးကျန်မှု ခံစားရစေခြင်း
ကိုယ်က ဖုန်းအသုံးပြုနေတာကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုကဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကို စကားမပြောတာမျိုး၊ အပြင်သွားလာဖို့ မခေါ်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သင်နဲ့ ဖုန်းက သက်သက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်က သက်သက် ဖြစ်လာပြီး သင် အထီးကျန်မှုကို ခံစားရလာနိုင်ပါတယ်။
၇) အတုယူ မှားစေခြင်း
အခုခေတ် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးချင်ကြတာကြောင့် လုပ်သင့်တာ / မလုပ်သင့်တာကို မစဉ်းစားတော့ပဲ အတုယူ မှားလာကြပါတယ်။ အားမကျသင့်တဲ့သူကို အားကျမိတာကြောင့်
နောက်ဆုံးတော့ ထိခိုက်တာ ကိုယ်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လူကြီးတွေဆုံးမမှုကို မှန်ကန်တယ် မထင်တော့ဘဲ လူမှုကွန်ယက်က ဖြစ်ပျက်မှုကို အမှန်ထင်လာရင် သင် မှားနေပြီလို့ တွေးသင့်ပါတယ်။
၈) ယဉ်ကျေးမှုကို ထိခိုက်စေခြင်း
အခုခေတ် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ သုံးနေတဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေ၊ အပြုအမူတွေကြောင့် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေရဲ့
အိနြေ္ဒ၊ သိက္ခာကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် တချို့ စကား အသုံးအနှုန်းတွေကိုလည်း ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး သာယာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေရှင်။